Fariin Jaceyl Xaada ku dhaqaajinaysa (Akhriso) | Gaaloos.com
Home » galmada » Fariin Jaceyl Xaada ku dhaqaajinaysa (Akhriso)
Fariin Jaceyl Xaada ku dhaqaajinaysa (Akhriso)
Sida aan la socono Kala dheerida marna makala saarto wadnayaal iyo qalbiyaal is daneeya inkastoo lagu qarash gareeynin waqti badan oo aynu u wadaqaadano si wadajir ah , marwalibana waxa aad ku taallaa qalbigayga iyo maskaxdayda oo la’aantaa mashaqeeyo howlna ma qabto adiga un baan ku eegayaa.
Lakin iskuma dhawin maxaa yeelay masaafada inoo dhaxeysa , xitaa meyl ahaan ma iskusoo dhawin balse fariimaheena ayaa taabanaya qalbiyadeena is tabibideenana waxa ay nagu keentaa dhoola cadeyn aan dhamaad laheyn.
Mar walba Waxa aan u fekernaa habeen kasta inta aanan seexan; waxaanu qiyaasnaa in aan isla joogno uuna jirkeenu istaabanayo oo qoortaha aanu iska taabanayno waxaanu u dhacnaa hurdo sidaasi waxa ayna inaga caawisaa in aan hurudno.
Ugu danbeeyntii Dhibmalehan sida aanu u kala dheernahay , qalbiyadeena ayaa israacsan waxa aynu nahay labo ruux oo isaga dhaw carabka iyo ilkaha oo ah labada iskugu dhaw aadmiga.
Title: Fariin Jaceyl Xaada ku dhaqaajinaysa (Akhriso)